အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး မူကြမ်းကို မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စဉ်
Photo: Thiha Tun, Aung Ko Ko/RFA
လာမယ့် ဧပြီလအတွင်း အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်တော့မယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စား လှယ်တွေရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘော တူစာချုပ်မူကြမ်း လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတက တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ဒီသဘောတူညီချက်ဟာ NCA လက်မှတ်ရေး ထိုးနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကတွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်၊ ဧပြီလအတွင်းမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ အတွက် သေချာပေါက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ ပြောလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာ နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားရမယ့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် တံခါးပေါက်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်"
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာ ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးတို့ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်မူကြမ်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရှေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်တော့မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖေါ်ဆောင်သူတွေအဖြစ် သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခံရ သူတွေဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတက ချီးကျူးပြောဆိုပါတယ်။
လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအပြီး ညနေပိုင်းမှာ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်း နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကို ရပ်စဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ နှစ်ပေါင်း ၇ဝ နီးပါး အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဟာ နိုင်ငံရေးပြဿနာအပေါ်မှာ အခြေခံ တာဖြစ်တယ်၊ ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းရန် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို ဦးစွာရပ်စဲဖို့လိုပါတယ်၊ တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာ အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး"
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တပ်မတော်ဘက်က ချမှတ်ထားတဲ့ မူ ၆ ချက်ကို ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ထားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိတဲ့ သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်တွေက သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေထံတင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
!!!! Gold , Wood ,Jade , and many kinds of material at jungle ethnics wars zone ... army general families will rich or by PEACE work ship .....
Can we say this agreement is the turning point for our country.Congratulation to all those all involved.I sincerely hope our beloved country once again prosper and standard of living rise again and play the important role in the world stage as its did before.Very happy.
ရှေ့ မှာ သမတ က အပစ်ရပ် စာချုပ် ချုပ်ပြီး နောက်က ကာချုပ် က စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေမှာပါ။
Mar 31, 2015 07:29 PM
ဖြစ်နိုင်ရင် ၊ ဖြစ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပါ။ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် ပြောသမျှ “ဖြစ်မလာ”တာရယ် ၊ ဦးအောင်မင်း က “ပြောချင်ရာ ပြော” လို့ အချိန်မစီးတာရယ်ကြောင့် “သံသယ”ဝင်စရာပါ။
Mar 31, 2015 01:14 PM